|| မင်းသေ့ ||
ဆရာ ကျော်ဝင်းက၊ ကျနော့် အဖေ နဲ့ ရွယ်တူ။ ဆရာ့ အသက်က၊ ၆၆ နှစ်။ ကျနော့် အသက်က ၂၆ နှစ်။ ကျနော်နဲ့ အသက် ၄၀ တိတိ ကွာတယ်။ ဆရာက၊ သူ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းနဲ့ ယှဉ်ပြီး၊ သမိုင်းနောက်ခံ ဝတ္ထုရှည်ကြီးကို ရေးတယ်။ “ပျောက်ဆုံးသွားသော မျိုးဆက်တစ်ခု” နာမည်နဲ့။ အခု ဒုတိယပိုင်း ထွက်ပြီ။
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ် သင်္ကြန်တွင်းမှာ၊ ဆရာက သူ့ ဝတ္ထုရှည်ကြီး (ပထမပိုင်း) ကို ရေးလို့ ပြီးခဲ့တယ်။ အခု ဒုတိယပိုင်းကို ရေးတယ်။ ပထမပိုင်းက၊ စာမျက်နှာပေါင်း ၅၈၀ ကျော်။ အခု စာမျက်နှာ ရ၀၀ ကျော်။ ပ နဲ့ ဒု ပေါင်း စာမျက်နှာ ၁၃၀၀ နီးပါး ရိှနေပြီ။ နောက် တတိယပိုင်း လာအုံးမယ်။
#ပျောက်ဆုံးသွားသောမျိုးဆက် တတိယပိုင်းမှာ၊ ဆရာက ၁၉၉၃ နဲ့ အဆုံးသတ်လိုက်ဖို့၊ လုပ်ထားတယ်။
၁၉၉၃ ဆိုတာ၊ ကျနော်မွေးပြီးလို့ ၂ နှစ် ရိှနေပြီ။ ကျနော် ၂ နှစ်သား။
ဝတ္ထုက စတုတ္ထပိုင်းထိ လာနိုင်သလား…. ကျနော် မပြောတတ်။
လက်ရိှ အချိန်ကာလလောက်ထိ ဆွဲရေးနိုင်ရင်၊ သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးမိတယ်။
ကျနော် တွေးမိတယ်။ ပျောက်ဆုံးသွားသော မျိုးဆက် အကြောင်း။ Lost Generation အကြောင်း။ ထပ်ပြီး ကျနော် ထပ်တွေးမိသေးတယ်။ Next Generation အကြောင်း။ ဆရာကျော်ဝင်းက ၂၀၀ရ ၊ ဇူလိုင်မှာ၊ ပီတာဒရပ်ကာ ရေးတဲ့ The Next Society ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို ဆောင်းပါး​တွေရေးပြီး စာအုပ်အဖြစ် စုစည်းထုတ် ထားပြီးသား။
အဲ့သည့် စာအုပ်ကိုလည်း ကျနော်ကြိုက်တယ်။
ဒီလိုနဲ့ ကျနော့် ခေါင်းထဲမှာ၊
- Next Society
ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေ တန်းစီဝင်လာမိတယ်။
ဒီစကားလုံးတွေနဲ့အတူ၊ မေးခွန်းတချို့လည်း ပေါ်လာတယ်။
- ပျောက်ဆုံးသွားသော မျိုးဆက်ကတော့ ရိှခဲ့ပြီ။
- နောက်လာမယ့် မျိုးဆက်ကရော… ဘာလဲ ၊ ဘယ်လဲ။
- နောက်လာမယ့် လူ့အဖွဲ့အစည်းကရော…. ဘယ်လဲ ၊ ဘယ်လိုလဲ။
ပျောက်ဆုံးသွားသော မျိုးဆက်ကို ကျနော် မာတိကာ ချလိုက်တယ်။
#ပထမပိုင်း (ပုံသွင်းခြင်း / ၁၉၆၈ - ၁၉၇၆)
- ဇာတ်၏ အစ (၁၉၆၂ ၊ ဇူလိုင် ၈ ရက်)
- ကြားကာလ၏ တိတ်ဆိတ်ခြင်း (၁၉၇၁ - ၁၉၇၄)
- အိုးဝေခေါ်သံ (၁၉၇၄ - ၁၉၇၆)
စာမျက်နှာ ၅၈၁ မှာ၊ ပထမပိုင်းပြီးတယ်။
#ဒုတိယပိုင်း (လှုပ်ရှားခြင်း / ၁၉၇၆ - ၁၉၈၄)
- နရသိန် (၁)
- နန်းတွင်း ရာဟုထောင့် (၁၉၇၆ - ၁၉၇၉)
- တော နှင့် တောင် (၁၉၇၉ - ၁၉၈၂)
- နရသိန် (၂)
- အဝတ်လဲခန်း (၁၉၈၂ - ၁၉၈၄)
စာမျက်နှာ ၁၂၈ရ မှာ၊ ဒုတိယပိုင်း ပြီးတယ်။
#တတိယပိုင်း (၁၉၈၄ - ၁၉၉၃)
- ဘဝသစ် (၁၉၈၄ - ၁၉၈၇)
- လှုိင်းသစ် (၁၉၈ရ - ၁၉၉၀)
- နရသိန် (၃)
- ရေှးဟောင်းထိန်းအင်အားတို့ အိုကြပေပြီ (၁၉၉၀ - ၁၉၉၃)
ပျောက်ဆုံးသွားသော မျိုးဆက် ပထမပိုင်းကို၊ ကား(လ)မာက်္ခ(စ) ရဲ့ အဆိုအမိန့်နဲ့ စတယ်။
“သေဆုံးပြီးသား၊ မျိုးဆက်များ၏ အစဉ်အလာနှင့် စိတ်ဒဏ်ရာများမှာ၊ သက်ရိှထင်ရှားရိှနေကြသူများ၏ ဦးနေှာက်ပေါ်တွင် အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုလို ဖိစီးလျက် ရိှနေတတ်ပေသည်….” တဲ့။
ကျနော့် ခေါင်းထဲ၊ အတွေးတစ်ခု ဝင်လာတယ်။
ကျနော် အတိတ်ကို ကြည့်တယ်။ ပစ္စုပ္ပန်ကို ကြည့်တယ်။ အနာဂတ်ကို မေှျာ်မိတယ်။ အတိတ်မှာ ဒီလိုဆိုခဲ့ရင်၊ ပစ္စုပ္ပန်က အခုလိုပဲ။ အနာဂတ်မှာရော ဘယ်လိုလဲ။ အတိတ်ရဲ့ မျိုးဆက်၊ အနာဂတ်ရဲ့ မျိုးဆက်…. ဘယ်ဒင်း၊ ဘယ်ဌာနကို ကျနော်တို့ တည်ဆောက်ဖြစ်ပါ့မလဲ။
ပျောက်ဆုံးသွားသောမျိုးဆက် ဒုတိယပိုင်းကို ၊ ထောင်ဋီကာလို့ပင် ကျနော် ပညတ်လိုက်ရမယ် မသိ။
နရသိန် (၁ / ၂) ၊ တော နှင့် တောင် နှင့်….. ဟူ၍ ဆိုလို့။
ဒုတိယပိုင်း အမှာစာမှာ၊ ထောင်အကြောင်းတွေ့လိုက်မိတယ်။
“အကျဉ်းထောင်တွင်၊ ပွဲကြည့်သူ မရိှ။ ဖိနှိပ်သူ နှင့် အဖိနှိပ်ခံပဲ ရှိသည်။ ပွဲကြည့်သူ မရိှ၍၊ ပွဲကြည့်သူ အထင်ကြီး အောင် ရဲရဲတောက် လုပ်ပြစရာလည်း မလို။ မိမိအနေအစားချောင်ရေးအတွက်၊ ဖိနှိပ်သူနှင့် နားလည်မွု ယူကြ သည်များ ခေတ်စားလာသည်…” ဟူ၍။
ဆရာရေးတဲ့ အဝတ်လဲခန်းကို ကျနော် အတော် စိတ်ဝင်တစားဖြစ်မိတယ်။ ကျနော့် စိတ်မှာ၊ အဝတ်လဲခန်းဆိုတာ ဘယ်လို ၊ ဘယ်သို့ မသိ။ ကျနော်လည်း မကြုံဖူး။ ကြုံဖူးတဲ့ မျိုးဆက်လည်း မဟုတ်။ ကျနော့် မျိုးဆက်ထဲ မှာ၊ ကြုံဖူးတဲ့ သူတွေ ရိှရင်….၊ မေးစမ်းကြည့်ချင်ရဲ့….။
၁၉၉၀ မှာ၊ ဒဂုန်တာရာရဲ့ နှင်းခဲပျော်ချိန် …. က၊ ကောက်နုတ်ချက်နဲ့ အမြည်းပေးလိုက်တယ်။
“ရေှးဟောင်းထိန်းအင်အားတို့ အိုကြပေပြီ….” တဲ့…။
ရေှးဟောင်းထိန်း အင်အား၊ ရေှးဟောင်းထိန်းအင်အား….
သူတို့က ဘယ်သူတွေလဲ။ ဘာတွေလဲ….
ကျနော်တို့ မျိုးဆက် လေ့လာဖို့….
သမိုင်း ဝတ္ထု ဖြစ်ခဲ့တယ်….။
ကျနော်တို့ မျိုးဆက်ကိုတော့၊ မေးခွန်းနဲ့ ရှင်သန်မယ့် မျိုးဆက် ဖြစ်စေချင်တယ်။ အတိတ်ကို၊ မေးခွန်းနဲ့ စဖို့။ ဒီလိုပဲ၊ သမိုင်းကို၊ မေးခွန်းနဲ့ ဆန်းစစ်ဖို့။
ကျနော် ဖတ်ဖူးတယ်။ သမိုင်းဆိုတာ…. နိုင်တဲ့သူက ရေးတာ… တဲ့။ ဟုတ်ရဲ့လား။ ဟုတ်နေရင်ရော…။
သမိုင်းကို၊ ရက်ရက်စက်စက် မေးခွန်းတွေနဲ့ လေ့လာနိုင်ရင်၊ ကျနော်တို့ မျိုးဆက် အတိတ်အမှန်ကို သိကြမှာပဲ လို့ မေှျာ်လင့်မိတယ်။
ပျောက်ဆုံးသွားသော မျိုးဆက်အကြောင်းကို…. မေးခွန်းတွေထုတ်ဖို့၊
အတွေးတွေ ပလုံစီနေလေရဲ့….. ။ ။။
ည ၈း၀၂
ရ ၊ မေ ၊ ၂၀၁၈။